1 Olee otú m nwere Weghachi My emerụ Files?
Hi, ụnyaahụ mgbe m nwara emeghe ụfọdụ foto na kọmputa m, m chọpụtara na m na-apụghị emeghe ha. Ha nile na-emerụ. Amaghị m ihe bụ ihe na-ezighị ezi ma m mkpa n'ezie ha azụ. Ihe ọ bụla echiche? Ekele.
Faịlụ nwere ike emerụ ruru ka a usoro okuku, virus agha ma ọ bụ na-ezighị ọrụ. A rụrụ arụ faịlụ bụ mgbe unusable na inoperable. Mgbe ihu nke a nke, ị nwere ike mbụ na-agbalị ịrụzi ha ma ọ bụ na-agbalị na-agba ọsọ a virus nchọpụta usoro. Na ụfọdụ ikpe a abụọ ngwọta aka. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike na-agbalị a na-atọ akụkụ data mgbake omume iji weghachi rụrụ arụ faịlụ.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a data mgbake omume na-enyere gị iji weghachi rụrụ arụ photos, videos nakwa dị ka akwụkwọ faịlụ. Na ya, ị nwere ike iweghachi rụrụ arụ faịlụ na e bupụrụ ma ọ bụ ehichapụ si egweri biini ma ọ bụ na-efu ruru ka a virus agha, usoro okuku ma ọ bụ formatted nkebi. Ugbu Wondershare Data Recovery bụ ike iji weghachi rụrụ arụ photos, videos, music, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery na mgbe ahụ na-amalite iji weghachi rụrụ arụ faịlụ.
2 3 Nzọụkwụ iji weghachi emerụ Files
Ebe a anyị na-Wondershare Data Recovery maka Windows dị ka ihe atụ. Mac ọrụ ike ibudata Mac version na weghachite rụrụ arụ faịlụ na yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ iji weghachi emerụ Files
Wụnye na ẹkedori Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị ga-ahụ ihe interface dị ka n'okpuru ngosipụta. Ebe ị na-awa na 3 mgbake ụdịdị. Iji weghachite rụrụ arụ faịlụ, ebe a anyị na-agbalị "nkebi Iweghachite" ọnụ.
Nzọụkwụ 2 Họrọ nkebi ka iṅomi
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ nkebi na gị rụrụ arụ faịlụ ebe na pịa "Malite" ka iṅomi.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-aga iji weghachi rụrụ arụ faịlụ site na mpụga nchekwa na ngwaọrụ, biko Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na họrọ ike mbanye.
Nzọụkwụ 3 Lelee Restorable Files na-amalite Weghachi
Mgbe iṅomi, niile hụrụ faịlụ ga-edepụtara ke edemede ma ọ bụ mbụ ụzọ. Ịnwere ike ihuchalu ụfọdụ faịlụ dị ka photos. I nwekwara ike ego ma hụrụ faịlụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachi ma ọ bụ na ha mbụ aha kwa.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta weghachiri eweghachi faịlụ azụ ya mbụ ụzọ. Ma i nwere ike ọ gaghị enwe ike iji weghachi ya.
1 Ọ bụrụ na gị faịlụ e n'ụzọ ezi uche mebiri emebi, ị nwere ike ghara weghachi ha.
2 Ọ bụrụ na "nkebi Iweghachite" adịghị aka, ị nwekwara ike gbalịa "Raw Iweghachite" mode.
Olee otú Idozi Bad Ndi on Draịvụ
> Resource> Utility> Iweghachi emerụ Files: 3 Nzọụkwụ iji weghachi emerụ Files